सकियाे ओली-प्रचण्डबीचको वान टु वान वार्ता, जुट्यो यस्तो सहमति! हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > सकियाे ओली-प्रचण्डबीचको वान टु वान वार्ता, जुट्यो यस्तो सहमति! हेर्नुहाेस्
सकियाे ओली-प्रचण्डबीचको वान टु वान वार्ता, जुट्यो यस्तो सहमति! हेर्नुहाेस्
admin October 31, 2020 October 31, 2020 समाचार	0
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको छलफल भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको बताइएको छ । छलफलमा ओली-प्रचण्डबीच सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति जुटेको स्रोतले बतायो । यद्यपि बैठकको मिति भने तय भएको छैन । यसअघि दुई अध्यक्षबीच कात्तिक ४ गते छलफल भएको थियो ।
त्यसपछि पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि छलफल रोकिएको थियो । पछिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस, अन्य नियुक्ति तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगायतका विषयमा प्रचण्ड ओलीसँग रिसाएका थिए ।
त्यसपछि ओली निकटका नेताहरु सन्देश लिएर पटक–पटक खुमलटार पुगेपनि प्रचण्डले छलफलका लागि बस्न मानेका थिएनन् । गत बुधबार ओली टिकट महासचिव विष्णु पौडेल र दिउँसो स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए । त्यसपछि ओली निकटका नेताहरुले लगातार प्रचण्डसँग भेट गरिरहेका छन् ।
बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर खुमलटार पुगेका थिए । शनिबार बालुवाटार जानुअघि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग प्रचण्डले छलफल गरेका थिए ।
दुई अध्यक्षबीचको बढ्दो मनमुटावले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रभावित भएको छ । गत २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तत्कालका लागि पार्टीको अन्तरविरोध हल गर्दै कार्तिक १५ देखि १६ सम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
केन्द्रीय कार्यालयका सचिवद्धय श्रीराम ढकाल र इश्वरी रिजालले केन्द्रीय सदस्यलाई पठाएको सूचनामा ‘कार्तिक १५ गतेदेखि आयोजना गरिएको तेश्रो पूर्ण बैठक कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित गरिएको’ उल्लेख छ । स्थगित बैठक बैठक आगामी मंसिर १५ देखि १७ मा आयोजना हुने सूचना दिइएको छ ।
तर, दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच उत्पन्न मतभेदले वैठक प्रभावित भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, कर्णाली विवाद र रअ प्रमुखको नेपाल भ्रमणले ओली र दाहालबीच तिक्तता बढाएको हाे । कर्णाली विवादमा उनीहरुले भिन्दाभिन्दै निर्देशन जारी गरेका थिए ।
कञ्चनपुरको जङ्गलमा किशोर-किशोरीको शव – प्रेम सम्बन्ध बन्यो दुबैको काल !
०७७ कार्तिक १६ गते, इ.स. २०२० नोभेम्बर ०१ तारिख आइतबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
ट्राफिकले ड्राइभरहरुको के जाँच्यो यस्तो ! हेर्दा ठ्याक्कै गर्भ रहे नरहे जाँचे जस्तै देखिने,प्रहरिनै चकित(भिडियो)
दुई वर्षदेखि खोरमा बन्धक रमिला भन्छिन मेरो कुरा न श्रीमानले सुन्छ न यो समाजले